कोरोना भाइरसः तत्काल हटाउनुहोस् मोबाइलबाट यी एप्स
काठमाडौं– पछिल्लो समय विश्वलाई रुवाएको छ, कोरोना भाइरसले । योसँगै पछिल्लो सूचना प्रविधिलाई पनि विशेष प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ काम भएका छन् । तर, सँगसँगै यहीबीचमा केही बदमास पनि देखिएका छन् । उनीहरु...
काठमाडाैं, चैत २४ : गृह मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको अनुगमनका लागि कोबडी (cobuddy) एप्स पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि क्वारेन्टाइनबाट मानिस भागिरहेका बेला अब एप्सले त्यसको निगरानी ग...
क्वारेन्टाइनको निगरानी अब एप्सबाट
२४ चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको अनुगमनका लागि कोबडी (cobuddy) नामक एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ । क्वारेन्टाइनबाट मानिस भाग्नेलगायतका समस्या देखिरहेका बेला एप्स ल्याइए...
–नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट ...
कोरोनाबारे जानकारी एकै ठाउँबाट, क्वारेन्टाइनको निगरानी गर्न एप्स
काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस बारे सम्पूर्ण सूचना जानकारी अब ‘वान डोर’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गर्ने भएको छ । कोभिड १९ बारे आधिकारिक सूचना अब सरकारले एकै वेबमार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको हो । विपद् ज...